Onyx bụ chalcedony dị iche iche. Agate na onyx dị iche iche nke chalcedony a na-adịghị ahụkebe bụ nke dị iche iche dị iche iche dị iche iche: agate nwere ụbọ akwara na onyx nwere ìgwè ndị yiri ya. Ụdị nke agbụ ya dị ọcha ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na agba, chekwaa ụfọdụ shades, dị ka odo odo ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ. A na-ejikarị ya, ụfọdụ ụdị nwere mgbidi nke nwa na / ma ọ bụ na-acha ọcha.
Ọ na-abịa site na Latịn, nke otu okwu ahụ, site na okwu Grik pụtara "claw" ma ọ bụ "mgbaaka". Na anụ ahụ ụda ụcha, onyx nwere ike ịsị na ọ yiri nkwụsị. Okwu Bekee "ntu" na-eji okwu Grik eme ihe.
Ejiri Onyx nke ìgwè nke chalcedony na agba agba agba. Ọ bụ cryptocrystalline, nke gụnyere ezi intergrowths nke silica mineral quartz na moganite. Ụgbụ ya dịka ibe ha, ma ọ bụ na-agbakasị ndị na-eme mkpọtụ na-emekarị na agates.
Sardonyx bụ ụdị dị iche iche nke ụsụụ ndị na-acha uhie uhie bụ sard, onyinyo uhie, karịa nwa. Ọ bụ ma eleghị anya, ọtụtụ ndị a ma ama dịgasị iche iche ma ọ bụghị dị ka ndị dị ka onyx na-acha uhie uhie. A na-eji ọgwụgwọ artificial mee ihe kemgbe oge ochie iji mepụta agba ojii na black onyx na ụgbụ na yellows na sardonyx. Ọtụtụ chalcedony n'ahịa bụ agba agba.
Ntuzi na ọgwụgwọ
A na-ejikarị aha ahụ mee ihe iji kọwaa ihe ndị ọzọ a na-akpọ banded, dị ka ngwongwo banded nke dị na Mexico, India, na ebe ndị ọzọ, na mgbe a pịrị apị, na-egbu maramara ma na-ere. Ihe omuma a di okpukpo karia ezi chalcedony, ma karia ya. Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị a pịrị apị dị ka chalcedony taa bụ ihe carbonate a.
E mepụtawo ụdị onyx artificial site na chalcedony nkịtị na agates. Pliny onye Okenye nke narị afọ mbụ, bụ onye na-eme ihe na narị afọ mbụ, kwuru na a na-eji usoro ndị a eme ihe n'oge ndị Rom. Ọgwụ maka ịmepụta agba ojii na agba ndị ọzọ na-agụnye chalcedony na-esi nri ma ọ bụ okpokoro na ngwọta shuga, emesị na-emeso sulphuric ma ọ bụ hydrochloric acid na carbonize sugars bụ ndị e tinyeworo n'ime elu nkume ahụ. A ka na-eji usoro ndị a eme ihe, yana ọgwụgwọ ndị ọzọ na-egbuke egbuke, a na-ejikwa ihe ndị a na-akpọ black onyx. Na mgbakwunye na ọgwụgwọ, a na-eji kpoo ọkụ na ọgwụgwọ na nitric acid iji mee ka ọ ghara ịdị ọcha.
Ndị Rom oge ochie na-ebu agha na-ebu sardonyx nke e ji Mars, chi agha. Ekwenyere nke a iji nye obi ike n'ọgụ. Na Renaissance Europe, a na-ekwere sardonyx iji nye nkọwa. Nkwenkwe omenala ndị Peasia bụ na ọ na-enyere epilepsy aka. Sardonyx na-eji omenala ndị Midwị mee ihe n'ụzọ dị mfe iji mee ka ọ dị mfe ịmụ nwa site n'itinye ya n'etiti obi nne.
zụta onyx eke n’ere ahia